सरकार भन्दा पार्टी शक्तिशाली, स्थापितपछि सोडारी, अब कसको पालो ? - Everest Dainik - News from Nepal
सरकार भन्दा माथि पार्टी छ र पार्टीले आचरणविरोधी या जनविराधी काम गर्ने कसैलाई पनि छूट दिन्न
काठमाडौं, मंगलबार सुदुरपश्चिम प्रदेश राष्ट्रिय मिडियामा चर्चाको विषय बन्यो । विषय थियो– सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घ सोडारी बर्खास्त भएको खबर ।
मन्त्री बर्खास्त हुने खबर आएपछि ‘सामान्य गाडी दुर्घटनामा किन निकाल्नुपरेको होला ?’ भन्ने प्रारम्भिक प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जालमा देखियो ।
तर, नयाँ मन्त्रीले सपथ लिएको एकैछिनपछि साँझ नयाँ खबरले सबै तरङ्गित बने ।
यो खबर फेरी बर्खास्त परेका मन्त्री सोडारीकै बारेमा थियो ।
अपरान्ह ढिलोगरि बसेको नेकपाको प्रदेश नेतृत्वको बैठकले सोडारीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कार्वाही गरेको थियो ।
साधारण सदस्य नै नरहने गरी कार्वाही गरेपछि भने यसअघिका स्वरहरु मत्थर भएका थिए ।
“पक्कै केही छ, त्यत्तिकै कार्वाही गरिएको रहेनछ ।’ नयाँ प्रतिक्रियाहरुको सार थियो ।
यो पक्कै केही चाहिँ सोडारीको पदीय आचरणसँग जोडिएको विषय थियो । नेकपा सूत्रले दिएको जानकारी अनुसार, उनीमाथि नैतिक आचरणसँगै जोडिएर उजुरी परेपछि पार्टीले कडा निर्णय लिएको थियो ।
याे पनि पढ्नुस नेकपामा माधव नेपालको मौनता !
स्थापित र सोडारीपछि अब कसको पालो ? भन्ने प्रश्न पनि यही कुरासँग जोडिएको छ । पार्टीको भूमिका शक्तिशाली हुने अवस्थासँगै पार्टी र जनताकोहित विपरित सामान्य कम्युनिष्ट नैतिकताविपरित आचरण गर्ने जो कोही पनि अबको तेश्रो या चौथो निशाना बन्न सक्ने देखिन्छ ।
ट्याग्स: Dirgh Sodari, Keshav Sthapit, nekapa